अनितालाई पनि छाडिएन - यौन कथा - Nepali Sex Story
Sex Story - English
Sex Story - Nepali
Home / Nepali Sex Story / Nepali Sex Story in Nepali / Nepali Youn Katha / चिकेका कथा / यौन कथा / अनितालाई पनि छाडिएन - यौन कथा
अनितालाई पनि छाडिएन - यौन कथा
The Reporter July 05, 2017 Nepali Sex Story, Nepali Sex Story in Nepali, Nepali Youn Katha, चिकेका कथा, यौन कथा
अनितालाई पनि छाडिएन - यौन कथा | चिकेका कथा
“अनिता ढोका खोलन , म पनि आउँछु नि भित्र ।” टोईलेटको ढोका ढकढकाउँदै मैले सोधे । “नाई पर्दैन , मलाई लाज लाग्छ ” भित्रबाट अनिताले जवाफ फर्काई । “के को लाज हौ , एकैछिन खोल न , मलाई पनि पिसाब लागेको छ क्या ” मैले जबरजस्ती गर्दै भने । अनिताले चुकुल खोलि अनि म पनि भित्र छिरे । अनिता पेण्ट खोलेर पिसाब फेर्न थाली । अनिताले त पुतीको भुत्ला खौरिएर चिटिक्क पारेकी रहीछ । “के हो अनिता , तिमीले त पुती खौरिएर चिटिक्कै पारेछौ , किन नि ?” मैले उत्सुक हुँदै सोधे । “त्यतिकै , अस्ति मेरो अफिसको साथी र मैले ईन्टरनेटमा एउटा ब्लु फिल्म हेरेका थियौ , त्यसमा केटीले आफ्नो भुत्ला पुरै खौरिएको देखे , अनि हामीले पनि खौरिएको नि , कस्तो हुन्छ भनेर ।” अनिताले सहजै उत्तर दिई । “ओहो , भने पछि , ब्लु फिल्म पनि हेरियो , होईन त ? अनि कस्तो लाग्यो त फिल्म ?” मैले पुन: उसलाई सोधे । “रमाईलो त रमाईलै भयो , तर छ्या , कता कता छिराको छिराको । कण्डोमा पनि गर्दा रहेछन है तिनीहरू त । मलाई त मुखले गरेर मुखमा नै झारेको देखेर त घिन लागेर आयो । झण्डै मैले उल्टी गरेको , मेरो साथीले त उल्टीनै गर्यो , छया छया ।” उनले भनी । “ए , त्यसो भए कण्डोमा चिकेको पनि हेर्यौ होईन त , त्यसो भए हामी पनि एक पटक गरेर हेरौन त , कस्तो हुन्छ ?” मैले कण्डोमा चिक्ने प्रस्ताव राखे ।
“नाई हुन्न , कस्तो कुरा गर्नु भाको , म त गर्न दिन्न । अगाडी गर्दा त कस्तो दुख्छ झन पछाडी गर्दा के हाल होला ? म त मर्छु होला ।” उनले विरोधाभाष पूर्ण उत्तर दिई । ” ल ल , अगाडी नै गर्छु नि त ।” भन्दै उनलाई पलङ तिर लगे । टी-शर्ट र पेण्टी मात्रै लगाएको अनिताला पलङमा सुताउदै किस गर्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै उसको सबै लुगा खोलिदिएर नाङगै बनाए । मैले पनि हतार हतार आफ्नो सबै लुगा खोलेर उनी माथि चढे । केहि बेर किस गर्दै दुधको पोका माड्दै उनको पुतीमा मेरो लाडो छिराए । यसपाली भने उनलाई त्यती दुखेन छ क्यार त्यती कराईन । पुती पनि पुरै रसाएकोले गर्दा होला , लाँडो छिर्न त्यती गाह्रो भएन । बानी परिसकेकोले होला, अनिताले मुनिबाट मच्ची मच्ची साथ दिन थाली । रसाएको पुती चिक्न एकदमै आनन्द आई रहेको थियो । “आहहहहह , ओहहहहहह, आहहहहह, अझे कस्सेर गर्नुन , मजा आईराछ , प्लिजजजजजज , अझै , अझै ” अनिताले आनन्दका साथ कराउन थाली । करीब १० मिनेट जति चिके पछि , उनको पुतीबाट लाँडो झिके अनि उनलाई घोप्टो पारे । मेरो लाँडो ठन्केर खपि नसक्नु भाथ्यो । अनि कुकुरले जस्तै गरि पछाडी बाट चिक्न थाले । छाँटिएको कम्मर च्याप्प समातेर अगाडी पछाडी गर्दै बल गरी गरी चिक्न थाले । यसरी चिक्दा अनितालाई दुखेछ क्यार , “बिस्तारै बिस्तारै गर्नु न , दुख्यो ।” अनिता कराउन थाली । उसको चिच्याहटको वास्तै नगरी दनादन चिक्न थाले । करीब ५ मिनेट जति चिके पछि , मेरो चोर औला बिस्तारै अनिताको कण्डोको दुलो निर लगे र बिस्तारै बिस्तारै छिराउन थाले । “छ्या के गरेको , त्यहाँ नचलाउनु न , काउकुति लाग्यो क्या ” अनिताले विरोध जनाई । “एकैछिन न , म बिस्तारै गर्छु क्या ” मैले सम्झाउन थाले ।
अनिता चुपचाप बसी रही , म चाँहि पुतिमा चिक्दै कण्डोको दुलो भित्र औला छिराउन कोशिस गर्न थाले । बल्ल बल्ल चोर औला छिराए । मनमनै सोँच्न थाले “आज त जसरी भए पनि कण्डो चिकेरै छाड्छु ।” केहि बेर पश्चात मैले औला निकाले र कण्डोको दुलोमा थुक लगाए । अनि फेरि औला छिराए । “अनिता तिमी सँग ओठमा लाउने भ्यसलिन छ ?” मैले सोधै । “छ , ब्यागमा छ ” उनले भनी । उनलाई पलङमै छाडेर म उसको ब्याग भए तिर लागे । उसको ब्यागमा ओठमा लाउने भ्यासलिन भेटाए र लिएर फेरि पलङ तिर लागे । अनिता घोप्टो परेर बसीराथी । आधा जति भ्यासलिन निकालेर अनिताको कण्डोको दुलोमा दलिदिए र दुईवटा औला छिराउन कोशिस गरे । भ्यासलिनले गर्दा होला , स्वात्तै छिर्यो । “अनिता , म बिस्तारै मेरो लाँडो तिम्रि कण्डोको दुलोमा छिराउँछु ल , एकै छिन सहनु ल ।” मैले भने । “बिस्तारै हाल्नु है , दुख्यो भने निकाल्नु नि फेरि ” अनिताले रुञ्चे स्वरमा जवाफ फर्काई । “ल ल हुन्छ ” भन्दै मैले बिस्तारै मेरो लाँडो उसको कण्डोको दुलो निर लगे । भ्यासलिनले चिप्लो भएको दुलोमा मेरो रन्केको लाँडो बिस्तारै छिराउन कोशिस गरे । अलि गाह्रो गाह्रो भयो , १ ईञ्च जति बल गरेरै छिराए । “ऐया दुख्यो , निकाल्नु निकाल्नु , मरे आमा ” अनिता कराउन थाली ।
Also Read: मायाँ लाई चिकेको कथा - Nepali Youn Katha
हत न पत लाँडो निकालेर भएभरको सबै भ्यासलिन मेरो लाँडो भरि दले र फेरि छिराउन थाले । “एकै छिन सहन यार , एक पटक छिरे पछि त मजा आउन थाली हाल्छ नि ।” मैले सम्झाउँदै अनितालाई भने । उनी चुपचाल बसी रही । मौका यही हो भनेर अलि बल गरेर मेरो लाँडो कण्डोको दुलोमा छिराउन थाले । भ्यासलिनले निकै काम गरेछ , पुरै लाँडो त स्वात्तै छिर्यो । “ऐया मरे आमा ” अनिता रुन थाली । “नरोउन डार्लिङ , अब छिरी सक्यो त , अब दुख्दैन के ” सम्झाउदै किस गर्दै भने र बिस्तारै बिस्तारै लाँडो भित्र बाहिर गर्न थाले । उनी चुपचाप बसी र सुँक्क सुँक्क गर्न थाली , म चै बिस्तारै बिस्तारै कण्डोमा चिक्न थाले । दुलो सानो भएकोले होला , लाँडोलाई च्याप्प समाएर छोले जस्तो महसुस भई रहेको थियो । यसरी कण्डोमा चिके जस्तो मजा त अहिले सम्म मैले महसुस नै गरेको थिईन । अब अनितालाई पनि दुख्न छाडेछ क्यार , उनी चुपचाल आफ्नो कण्डो अगाडी , पछाडी गरी रही । म पनि स्वर्गको अनुभुती गर्दै बल गरी गरी कण्डोमा चिक्न थाले । करीब १० मिनेत जति चिकेपछि मेरो लाँडोले माल छाड्ने बेला आयो , अनि हतार हतार लाँडोलाई बाहिर निकाले अनि अनितालाई उत्तानो पारे उसको मूख भित्र लाँडो छिराएर सबै माल उसको मुख भित्र झारे । भएभरको सबै माल अनिताले ओकलि अनि उत्तानो परेर आँख चिम गरेर पल्टी रही । म पनि थाकेर लोत भाकोले उसकै छेउमा पल्टे । केहि बेर किस गरे अनि दुध माड्दै बसे । “नया एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त डार्लिङ ” मैले सोधे । “मजा त आयो तर दुखि राछ , अब एकछिन यतिकै बसौ ल , मलाई त हिड्न नै गाह्रो होला जस्तो छ । तपाई त जिद्धी मान्छे है , आज मलाई कण्डोमा पनि गरेर छाड्नु भो है ।” रुञ्चे स्वरमा अनिताले भनि । “अनि के भो त , रमाईलो गर्ने मजा लिने भनेको यस्तै त हो नि , सँधै एउटै तरिकाले गरेर पनि मजा आउँछ त लाटी । आई लभ यु डार्लिङ ” भन्दै दुध माड्दै किस गर्न थाले । उनी पनि मलाई किस गर्न थाली , यतीकैमा कति बेला निदाईएछ , झसँग व्युझिदा ४ बजि सकेको रहेछ । हतार हतार लुगा लाएर हामी निस्कयौ , अनितालाई बानेश्वर छाडे र म घर तिर लागे।
अनितालाई पनि छाडिएन - यौन कथा Reviewed by The Reporter on July 05, 2017 Rating: 5
Office ko Satthi Sanga Lodge ma Nangai Suty - Nepali Chikeko Youn Katha
Office ko Satthi Sanga Lodge ma Nangai Suty - Nepali Chikeko Youn Katha Hy!! ma Anisha ho ra mero height 5ft 5inch ho ani mero figure 3...
Bahini lai Bathroom ko Floor ma sutayera Chikeko Nepali youn Katha
Didi Ko Saathi Chikeko youn katha
नर्स पदने बिनीता दिदीलाई चिकेेको मेरो यौन कथा
Chatpate banaune didi lai rati chikeko katha
Vena lai josyaauna ma kapada nalagai unko room ma chire
Visit Nepali Youn Katha For more Stories
This blog contains explicit content in words only you will not find any Adult or X - Rated Images or Videos in this blog.
All the content are Nepali Youn Katha, Stories in Nepali and English. Nepali Chikeko Katha is for fun and Entertainment Only!
You can contact us through nepalikathapart2@gmail.com
Featured Posts Neighbor Nepali Nepali Chikeko Chikeko Katha Nepali Puti Nepali Sex Story Nepali Sex Story in English Nepali Sex Story in Nepali nepali yaun katha Nepali Youn Katha Sex Story with Teacher Travel ma Chikeko Katha चिकेका कथा यौन कथा
All the Nepali Sex Stories in this blog are fictional and if the matches to you than it is entirely coincidental. All the Images are non-adult and are downloaded from Google.
If you think the post are not good enough and should be deleted than comment on that post, We will remove it.